🥇 ▷ Macruufka 7aad wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iskuxirid xiriiradaada Google ✅
Macruufka 7aad wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iskuxirid xiriiradaada Google
Waxaa jira waxyaabo yar yar oo cusub oo lagu ogaanayo gudaha macruufka 7 ka gadaalna waxaa laga helaa codsiga xiriirada ee aaladdayada. Qaybtaan, waxaan ku dhex dhejin karnaa xiriirada aan ku leenahay Google ee aaladda iOSka, sidaa darteed waxaan ku keydin karnaa jadwalka xiriirada ee labadaba iCloud iyo daruuraha Google. Waa run in doorashadani ay fiican tahay haddii lagu daro qalab macruufka ah, oo aad mid ku leedahay Android, marka waxaad yeelan kartaa dhammaan xiriirada labada aaladood.
Warka ku saabsan Google ayaa joojisay xiriirinta iyo kalandarrada ay la leedahay macruufka iyada oo loo marayo serveryada ActiveSync si ay si uun ugu siiyaan CardDav iyo CalDav, borotokoollada mas’uul ka noqon doona midaynta jadwalkayaga iyo kalandarkayaga daruuraha Google.
In kasta oo ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo ku dhacay Apple sababta oo ah isku-xirnaanta xiriirada iyo jadwalka taariikhda iyada oo loo marayo CardDav iyo CalDav. Macruufka 7 waxaan ka aragnaa horumar xagga wada shaqeynta ah ee udhaxeysa aaladda iyo Google.
iOS 7 Hagaajinta Sync u dhexeeya Google iyo aaladdaada
Waad ku mahadsantahay ragga ka socda iDownloadBlog, waan ogaannay taas iOS 7 Waxay keentaa nidaam cusub oo hagaagsan oo Google ah. Xaqiiqdii, Apple Wuxuu qabtay shaqo aad u wanaagsan oo leh muuqaalkan cusub ee codsiyada Xiriirka.
Si aad u tijaabiso isku-xirka u dhexeeya qalabkaaga macruufka iyo daruuraha Google, waa inaad lahaataa oo keliya ku dar koontada emaylka Gmail Y dhaqaajiso kabaalka xiriiriye. Kaliya markaa xiriirada aad keydisay Google ee qalabkaaga macruufka ah waa la wada shaqeyn doonaa.
Mar haddii aan ku darnay koontada Gmail-ka oo aan ka hawlgalno isku-xirnaanta xiriirkeenna, waa inaan helnaa oo keliya dalabka Xiriiryada oo guji «Kooxaha». Kadib riixida, waxay ina tusi doontaa xiriirada aan rabno inaan tusno, labadaba kuwa aan keydinay iCloud sida kuwa aan ku haysano Xiriirrada Google.
Marka laga bilaabo hadda, haddii aan abuurno xiriir ku saabsan aaladdayada macruufka, si otomaatig ah waxay si aad ah ula shaqeyn doontaa daruuraha Apple, iCloud, sida daruuraha Google. Caddee in lala shaqeeyo labada daruur, xiriirka internet ayaa loo baahan yahay, ilaa markaa jadwalkayagu lama dhexgeli doono Apple iyo Google Shaki la’aan, waa horumar muhiim ah maadaama, sidii aan horayba u soo sheegnay, aan haysanno aaladda Android oo aan u baahan nahay yeeshaan xiriiryada iyo kalandarka labada aaladaha isku mar.
Ma u malaynaysaa in horumarintan lagu guulaystay marka loo eego isku-dubarida iOS 7 ee Google?
Haddii aad jeclaan lahayd maqaalkan, ha ka waaban inaad u codee ama la wadaag iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada ee aad ugu jeceshahay (Twitter, Facebook, iwm.) badhamada waxaad ka heli doontaa kor.